Vaovao - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Jwell ao amin'ny tsena iraisam-pirenena faha-30 Istanbul Plastics Industry Fair
Raha mbola mitohy ny fihanaky ny areti-mifindra manerantany, Jwell dia mbola miziriziry amin'ny fanatrehana ny 30th International Istanbul Plastics Industry Fair any Torkia ny 1 ka hatramin'ny 4 Desambra.
Manatrika fampirantiana matihanina maro i Jwell tamin'ny Oktobra
Mitombo ny fampirantiana anatiny sy iraisam-pirenena vao haingana, manatrika fampirantiana matihanina maro ihany koa i Jwell, andao hojerentsika....
PVC-UH sodina --- safidy vaovao ho an'ny tambajotra sodina an-tanàn-dehibe
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny fipoahana fantsona an-tanàn-dehibe, ny fivoahan'ny rano ary ny tranga hafa dia mitranga matetika, izay niteraka fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny olona sy ny diany………
Sarimihetsika akanjo TPU fiara
Androany, andeha hampahafantatra ny rojo indostrialy amin'ny sarimihetsika akanjo. Inona no atao hoe sarimihetsika fitafy fiara? Raha ny marina dia sarimihetsika fiarovana amin'ny fiara izy io, mitovy amin'ny akora fiarovana / sarimihetsika fiarovana amin'ny finday ...
Ny tsipika famokarana sodina HDPE avo lenta dia sahirana amin'ny fanaterana
Na dia mafana aza ny vanin-taona mafana, ny orinasa Jwell sodina fitaovana dia mbola sahirana amin'ny fandefasana haingam-pandeha HDPE fantsona famokarana isan'andro. Tsy ho an'ny mpanjifa eo an-toerana ihany, fa ho an'ny mpanjifa maro any ivelany, toa an'i Torkia, Maraoka, Yem...
Lanonana fanokafana ny BKWELL JWELL DWELL Birao any ivelany any Thailand
Namana tamin'ny fikambanam-indostrialy any Shina sy Thailand no nandray anjara tamin'ny lanonana fanokafana ny BKWELL JWELL DWELL Office Foreign ....
1, PEEK （polyether-ether-ketone） ， dia fitaovana polymer thermoplastic kristaly misy hafanana miempo 334 ℃. Manana tombony amin'ny tanjaka mekanika avo, fanoherana ny hafanana avo ......
Hafanana, hafanana, hafanana, fientanentanana, hafanam-po ... Ity no tena fanehoana ny sehatry ny fampirantiana fingotra sy plastika Chinaplas2019 iraisam-pirenena. Tamin'ny 23 Mey, andro fahatelo fampirantiana Chinaplas2019, dia mbola mazoto hatrany ireo mpampiranty, ny ...
Rehefa afaka roa andro nanjelanjelatra dia nieritreritra aho fa namela sasatra tamin'ny tarehy foana isika, fa ny fanjakan'ny tsirairay na niroboka tao anaty asa feno fientanam-po, dia nofenoina tsiky feno fifaliana ....
Home Previous 1 2 3 4 ManarakaLast - Total 40 1 dia mirakitra Current page / Total 4 10 isaky ny pejy